Testosterone Enanthate Muscle Building CAS 315-37-7 Testosterone Raw Powder miaraka amin'ny fandefasana haingana sy azo antoka
Solvents:benzyl alcohol sy benzyl benzoate
Mpitatitra:USP menaka voanio voaloboka
Anarana iombonana:Testoxyl, Testosterona, Testodex, Enantat, Testoviron, Cidotestone, Testobilin, Enanthate, Test E, TestaPlex E, Enantrex, Enantbolic, Testofort, Testonova, Androfil, Nuvir, Asset-250, Menocare, Delatestryl, Cidotestone, Testobolin, Testabolina
Testosterone Enanthate 250mg/mL fomba fanamboarana tsindrona bebe kokoa
Recipe 250mg/mL mahazatra ho an'ny 100mL N
25 grama vovoka Testosterone Ethanate (18.75mL)
Recipe 250mg/mL mahazatra ho an'ny 100mL No BB #2
Recipe mahazatra 250mg/mL ho an'ny 100mL
Recipe mahazatra 300mg/mL ho an'ny 100mL
30 grama vovoka Testosterone Etanate (22.5mL)
Recipe mahazatra 400mg/mL ho an'ny 100mL
40 grama vovoka Testosterone Etanate (30ml)
48 mL menaka
Testosterone Enanthate dia steroïde injectable izay matetika ampiasaina amin'ny endrika testosterone amin'ny atleta sy ny bodybuilders mitovy.Ity vahaolana solika ity dia mampiroborobo ny fitomboan'ny hozatra, ny lanjan'ny vatana ary ny fahazotoan-komana.Testosterone enanthate dia tena mahery vaika ary mitondra fandeferana avo be amin'ny ankamaroan'ny lehilahy lehibe.Amin'ny maha-mpitsabo fitsaboana azy, ny fampiasana Testosterone Enanthate dia afaka manova tanteraka ny fiainanao.
Test Enanthate dia hormonina steroïde avy amin'ny androgen ary hita amin'ny biby mampinono sy ny vertebrates hafa, ny fitsapana Enanthate dia miafina voalohany indrindra amin'ny fitsapana ny mailaka sy ny ovaire amin'ny vehivavy, na dia kely aza no ambaran'ny adrenal glands, fitsapana Enanthate no fitsipika. hormonina ara-pananahana lahy sy steroid anabolika.
Ny test enanthate dia araraotin'ny atleta sasany sy ny mpanamboatra vatana.Ny dikan-teny enanthate amin'ny testoster-iray dia iray amin'ireo zava-mahadomelina manatsara ny fampisehoana tsara indrindra mba hampiroboroboana ny fitomboan'ny hozatra, ny fahaverezan'ny tavy, ny fahatanjahana, ny fahaizana miatrika fanazaran-tena mahery vaika, ary ny fanarenana aorian'ny ratra.Ny test enanthate dia ankafizin'ny mpanao fanatanjahantena matihanina, indrindra fa ny atleta matanjaka sy ny atleta matihanina ary ny bodybuilders, satria manampy amin'ny fanatsarana ny haavon'ny famaritana hozatra, ny proteinina sy ny fihazonana azota, ankoatra ny tsy fisian'ny voka-dratsiny, raha tsy misy ny fanararaotana na ny ambany.Ny steroid koa dia ampiasaina ho ampahany amin'ny fitsaboana fanoloana testosterone mba hitsaboana ny lahy hypogonadal na hanentana ny fahamaotiana amin'ny lehilahy voafantina tsara miaraka amin'ny fahamaotiana mazava.
Test Enanthate Application
Testosterone enanthate dia matetika ampiasaina mba hampitombo ny hozatra lanjan'ny bodybuilders.Also Testosterone enanthate no tena fampiasa matetika ny testosterones.Na dia matanjaka be aza ny mahazo hozatra sy tanjaka, amin'ny fotoana iray ihany dia mora sy azo alaina.Testosterone enanthate dia steroid ester tokana maharitra maharitra.Karbonina 7 ny halavany.Rehefa maka be dia be ny steroid esterified, ny totalin'ny lanja dia fitambaran'ny ester lanja sy ny steroid.Noho izany, ny testosterone enanthate dia aleo kokoa noho ny cypionate sy sustanon.Raha mpampiasa voalohany ianao dia manoro hevitra anao izahay haka enanthate na cypionate. Satria lava kokoa noho ny propionate ny esterony amin'izany fomba izany, dia hampihena ny isan'ny tsindrona ianao.Ny testosterone enanthate dia aromatizes kely kokoa noho ny sustanon, na dia tokony hampiasa anti-estrogens miaraka amin'ny toy ny nolvadex sy clomid aza ianao mba hisorohana ny gynocomastia.
Test Enanthate Dosage
Ny dosage ankapobeny dia 250mg hatramin'ny 750mg isan-kerinandro.
Fanamarihana: Ny haavony dia ampy, ary tokony hanome ny mpampiasa tombony haingana ny hery sy ny lanjan'ny vatana.Ambonin'io haavo io dia tsy isalasalana fa hiharihary kokoa ny voka-dratsin'ny estrogenic, mety hihoatra ny lanjan'ny hozatra vaovao azo.
Ahoana ny fomba fanaovana menaka Test E 250
Dingana 1: Asio vovobony Test E ao anaty vilia baolina
Dingana 2: Apetraho ao anaty vilia baolina ny BA
Dingana 3: Apetraho ao anaty vilia baolina ny BB
Dingana 4: Apetraho eo amin'ny heater ny beaker, manodidina ny 80 ºC ny mari-pana.Ampiasao ny tsorakazo fitaratra hanaitra ny rano mandra-pahalevon'ny vovoka ao anaty rano tanteraka, dia ho ranon-javatra mavo mangarahara.
Dingana 5: Esory avy eo amin'ny heater ny beaker, andraso mandra-pahafatin'ilay ranon-javatra mavo mangarahara
Dingana 6: Apetraho ao anaty vilia baolina ny EO, ampiasao ny vera mba hamporisihana ny ranony mandra-pahatongan'ny ranon-javatra mavo mangarahara indray.
Dingana 7: Sivana amin'ny sivana sterile na milina fanivanana ny rano
Ahoana no hisorohana ny fanaintainana Test E alohan'ny tsindrona?
1. Esory ny fitambarana miaraka amin'ny menaka manapaka sterile mba hahazoana mg / ml amin'ny <=200 ho an'ny ester lava ary <=100 ho an'ny estera fohy.
2. Aza variana amin'ny b-12, ny ranony miorina haingana dia haingana dia tsy hisy fiantraikany.
3. Afanaina moramora ny menaka mba hanatsarana ny viscosity.Azonao atao ny mametraka ny vial ao amin'ny efitra fandroana ary avelao ny rano mafana hikoriana mandritra ny 2 minitra, ary kobanina tsara.Izany dia hampidina ny viscosity menaka ary hanamora ny fisintonana azy ao amin'ny syringe.
4. Tsindrona moramora mba hampihenana ny fifindran'ny hozatra fascia, maka 30 segondra isaky ny ml.Mampiasà tsindrona 25g hanindrona ka hanery anao hifindra moramora.
5. Ampio 20% Benzyl Benzoate amin'ny volume ny propionate sy phenylpropionate esetrs.
6. Ampiasao ny fanjaitra 23g mba hisorohana ny fanerena avo lenta amin'ny fanjaitra kely kokoa.
7. Tsindrona matetika w/kely volume, <3ml ho an'ny hozatra lehibe sy <2ml hozatra kely kokoa.
8. Ataovy izay hahazoana antoka fa ny tsindrona dia lalina ao anaty hozatra ary feno amin'ny alàlan'ny tavy ambany hoditra
9. Azonao atao koa ny manampy: 100mg Benadryl adiny iray alohan'ny tsindrona;800mg ibuprofen adiny iray alohan'ny tsindrona.
Lisitry ny menaka tsindrona steroid
Vovoka hormonina steroid:
Testosterone Series Série Methenolone
Anaran'ny vokatra CAS.No Anaran'ny vokatra CAS.No
Testosterone Acetate 1045-69-8 Steroid am-bava
Testosterone propionate 57-85-2 Anaran'ny vokatra CAS.No
Sustanon 250 Anaran'ny vokatra CAS.No
Série Nandrolone Cardarine (GW-501516) 317318-70-0
Anaran'ny vokatra CAS.No Andarine (S4) 401900-40-1
Anaran'ny vokatra CAS.No YK11 431579-34-9
Trenbolone Acetate 10161-34-9 Fanatsarana ny firaisana ara-nofo
Trenbolone Enanthate 10161-33-8 Anaran'ny vokatra CAS.No
Anaran'ny vokatra CAS.No Sildenafil citrate 171599-83-0
Boldenone 846-48-0 levitra 224789-15-5
Anaran'ny vokatra CAS.No Finasteride 98319-26-7
Dehydroisoandrosterone (DHEA) 53-43-0 Fanaintainana famonoana
Dehydroisoandrosterone 3-acetate 853-23-6 Anaran'ny vokatra CAS.No
Anaran'ny vokatra CAS.No Lidocaine HCL 23239-88-5
Steroid am-bava sy tsindrona mafana
Methandienone (Dianabol) tsindrona 50mg/ml
Oxymetholone (Anadrol) tsindrona 50mg/ml
Test Mix 300 Andro Test 450
Fitsapana telo 300 FMJ 300
Fitsapana telo 180 Fangaro manapaka 175
Zaza telo 300 Anomass 400
Fonosana:10ml / vial, 10 vial / boaty (Aluminium foil kitapo), 10 vial / boaty (Aluminium foil kitapo)
fitahirizana:Tehirizina ao anaty fitoeran-javatra mangatsiatsiaka sy maina mihidy tsara.Halaviro ny hamandoana sy ny hazavana / hafanana mahery.
Fanaterana:Matetika ao anatin'ny 3-5 andro fiasana aorian'ny fandoavana feno.
Fandefasana:EMS, DHL, TNT, UPS, FEDEX, BY AIR, BY SEA, DHL Express, FedEx sy EMS ho an'ny habetsahana latsaky ny 50KG, matetika antsoina hoe DDU fanompoana; ranomasina fandefasana entana mihoatra ny 500KG;Ary ny fandefasana rivotra dia misy ho an'ny 50KG ambony; Ho an'ny vokatra avo lenta, azafady mifidiana ny fandefasana rivotra sy ny DHL express ho an'ny safe.Ny fonosana dia fiainana manokana sy fiarovana, fitaterana haingana sy azo antoka, misy nomeraon'ny waybill afaka manara-maso ny fihetsiky ny entana.
Q1: Ahoana no hanamafisana ny kalitaon'ny vokatra alohan'ny hametrahana baiko?
A: misy santionany maimaim-poana, fa ny saram-pitaterana entana dia ho ao amin'ny kaontinao ary ny fiampangana dia hiverina aminao na hanesorana ny baiko amin'ny ho avy.
Q2: Afaka manome ahy fihenam-bidy ve ianao?
A: Azo antoka fa miankina amin'ny qty.Larger baiko afaka mankafy ny vidiny mora kokoa.
Q3:Rehefa alefanao ny baiko?
A: Amin'ny ankapobeny ao anatin'ny 2 ka hatramin'ny 3 andro aorian'ny fanamafisana ny fandoavanao, satria mila fotoana handaminana ny Stealth Packing ho an'ny fandoavana 100% izahay.
Q4:Afaka manome antoka ve aho fa afaka mahazo ny entako tsy misy olana mahazatra?
Eny, manana serivisy Reship izahay. Afaka mahazo ny entanao tsy misy olana ianao.
Q5: Ahoana no fomba fitondranao ny fitarainana momba ny kalitao?
A: Voalohany indrindra, ny fanaraha-maso ny kalitao dia hampihena ny olana momba ny kalitao ho akaiky aotra.Raha tena misy olana momba ny kalitao ateraky ny anay, dia halefanay maimaim-poana ny entana ho soloina na hamerenana ny fahaverezanao.
Q6: Karazana fepetra fandoavam-bola inona no ekenao?
A: Ho an'ny baiko rehetra, azonao atao ny mandoa amin'ny Paypal, Bitcoin, T / T, Western Union na Money Gram.
Q7: Ahoana no hifandraisana aminay?
A: Mampiasa mailaka, whatsapp, wickr me, wechat, sns.koa aza misalasala mifandray amiko raha misy ilainao.
teo aloha: High Purity UK USA Domestic Shipping Hormones Steroids Sarm AICAR Powder ho an'ny fatiantoka
Manaraka: Testosterone Enanthate Injectable Anabolic Steroid Test E Enanject 250mg/ml Ho an'ny Muscle Mass
Manatsara ny fiaretana fanazaran-tena
Vovoka fatiantoka matavy
Test E vovoka
Test Enanthate vovoka
Testosterone Enanthate vovoka
99% Purity parabolan Trenbolone Enanthate Raw P...
Fonosana kosmetika ho an'ny Testosterone Enanthate Ra...
Testosterone Enanthate Muscle Building CAS 315-...
Test E Steroid Powder Bodybuilding Pharmaceuti ...